नेपालसँग अफगानिस्तान १३ गोलले पराजित, बुद्ध तामाङले गरे ह्याट्रिक ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालसँग अफगानिस्तान १३ गोलले पराजित, बुद्ध तामाङले गरे ह्याट्रिक !
काठमाडौं, असोज १० । भारतमा भइरहेको ४६औ एसियन यु-१८ स्कुल च्याम्पियनसिपमा नेपालले अफगानिस्तानलाई भारी गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
भारतको आग्रामा आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई १३-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । नेपालको जितमा दिनेश हेन्जनले चार गोल गरे ।
बुद्ध तामाङले ह्याट्रिक गरेको खेलमा रितिक खड्काले दुई, नितिन थापा, जय गुरुङ, अशिम गुरुङ र अनिल महर्जनले एक एक गोल गरे । अफगानिस्तानका सियावासी हुसेनीले पेनाल्टीमार्फत एक गोल फर्काए ।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरे पनि नेपाल सेमिफाइनल पुग्न सकेन । समूह चरणको दुई खेलमा पराजित भएको नेपालले अब पाँचौं स्थानका लागि बिहीबार श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टोलीका व्यवस्थापक रुपेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
समूह ‘ए’मा रहेको नेपालले मंलबार चीनलाई ३-१ ले हराएको थियो । यसअघि असोज ६ गतेको खेलमा थाइल्याण्डसँग २-० र ९ गते इण्डोनेसियासँग २-१ ले पराजित भएको थियो । -रासस
ट्याग्स: Afaganitan vs Nepal, Goal, India, एसियन यु-१८ स्कुल च्याम्पियनसिप